Villas okwamanje ku iningi lezakhamizi ezisemadolobheni. Ngokuvamile sebevele ifakwe. Nokho, uma izwe isanda kuthenga, kudingeka sibekezelele abanye umzamo ukuze wenze ukuhlala ukhululekile endlini yezwe. Lokhu kusebenza izinto eziningi ezahlukahlukene, kufaka phakathi ezifana cottage yangasese. Ubukhulu lokhu isakhiwo kumele ibalwe ngendlela efanele. Woza, Yiqiniso, kulokho, eqinisweni, izilinganiso abantu abayoba ukuyisebenzisa. Kunoma ikuphi, emnyango ekamelweni wena musa bend ikhanda noma izindololwane uthinte udonga phakathi ukusetshenziswa.
Ngaphambi kokuba bathathe ukwakhiwa, kubalulekile ukucacisa indawo lapho izofakwa lo mklamo ngokuthi cottage yangasese. ibalwa kusengaphambili. Ngaphezu kwalokho, sicela uqaphele ukuthi ibanga emagcekeni kufanele kube ngamamitha okungenani eziyisithupha. Awukwazi ukuba aye endlini encane futhi eduze kahle. Kungcono ufake closet nge waleso endaweni. Uma kwenzeka ukuthi unuka, kufanele Ungazihluphi wena nomakhelwane nakakhulu.
Indlela elula ukusebenzisa lolu luhlobo kwamapulangwe imishayo. Summer yangasese lokhuni Kulula ukwenza kanye nezindleko engabizi. Uzodinga Amabha 10x10 ezine zezinsika, accountant kanye umqhele engenhla. Ngaphezu kwalokho, uzodinga ukuthenga impahla ezincane esigabeni cross -. 5x5cm Lokhu ugodo oludingekayo ukuze isinyathelo iyunithi. Isikhumba is arcade kwenziwa emabhodini. Ngaphezu kwalokho, ibhodi ngeke yadingeka phansi nophahla, ukufulela impahla ngoba uphahla. Isisekelo zingenziwa ngokhonkolo, kodwa kungcono ukuba sembelwa yokubeka phansi futhi uthele ingxube. Uma indawo uzimisele futhi izinto ezidingekayo kanye namathuluzi ngomumo, usungaqala empeleni ukuklama iqoqo.
Into yokuqala okumele uyenze - kuyinto umgodi ngaphansi yangasese cottage. Ubukhulu bayo incike ubukhulu isakhiwo ngokwaso. Standard yangasese okufana - 1 m ububanzi, nobude 1.5 m -. 2 m endaweni Pit kufanele ibe ncane kune- endaweni design, kungenjalo ngeke ukufaka yokubeka. Standard ubukhulu - 75x75. Kodwa kungcono ukwenza kube bangempela futhi lakhishwa closet at the ezingemuva. Khona-ke kuyoba lula ukuhlanza ekuklanyweni esizayo. Ingxenye ukuthi uhlala ngaphandle, nje uvale lid. I emgodini ukujula incike lemali kanye nokuvama ukusetshenziswa insiza eziphilayo.
Summer WC, izithombe zazo kungabonwa esihlokweni inguqulo esezingeni cottage. Ngakho izingongolo embiwe emhlabathini futhi kugcwalisa ukuklanywa yasenhla nemithombo yasenzansi Amabha ovundlile. Ingasetshenziselwa at engele efanayo. Ngaphezu kwalokho, imitha kusuka ezingeni phansi ikusasa kubalulekile ukuhlela izimbambo ovundlile ne izinhlangothi ezimbili.
Uma ngohlaka usulungile, ukuthi ugcwele ku ingaphakathi amapulangwe ingxenye encane ezingeni ukuphakama okunethezekayo isinyathelo. Khona-ke ukuklama sheathe amabhodi ezinhlangothini ezintathu. Ukuze wenze olwehlelayo kophahla kwenye amapulangwe irowu engenhla kuthiwa eyayigcwele ibha ezengeziwe. Ngaphezu kwalokho, Uhlaka top and clapboard. Ukuvikela isikhala elingaphakathi yokulwa umswakama usebenzisa noma iyiphi impahla ukufulela etholakalayo.
All that remains - ukugcwalisa le floorboards, ukuhlela plywood esihlalweni, pre-cut emzuliswaneni imbobo kanye hang umnyango. Suburban WC, ogama Ubukhulu kukhona ukwakhiwa elula futhi iqine usulungile. Kungenzeka ukuba livalele ukushisa esebenzisa foam noma amaminerali uvolo, eminye plywood sheathing.